परिवारमैत्री वातावरण रहेका एक्वा बर्ड इको रिसोर्ट (भिडियो रिपोर्ट) - inaruwaonline.com
यसपालीको विदामा हुन सक्छ तापाईकोलागि रमणिय गन्त्वय
प्रकाशित मिति: सोमबार, आश्विन २५, २०७८ समय: १५:४४:२३
गरे के हुन्न ? १४ वर्ष युरोपका विभिन्न देशमा बसेका सुरज गिरी पिआर कार्ड त्यागेर नेपाल मै रिसोर्ट संचालन गरेका छन । बिदेशी भुमीमा गरेको श्रम र अनुभवबाट गिरीले स्वदेशी भुमीलाई नै उर्वर बनाउन खोज्दै छन। कोशी गाउँपालीका वडा नं. ३ मा रहेको कोशी कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा गिरीले सञ्चालन गरेको उक्त रिसोर्टमा १५ जनाले रोजगारी पाएको अवस्था छ। कोरोना केही सुस्ताएको बेला रिसोर्टमा आन्तरिक र बाहिरिय पर्यटकको चहलपहल बढेको गिरिको भनाई छ ।
३ वर्ष अगाडी मात्र संचालनमा ल्याएको रिसोर्ट कोरोना कहरले थिचिए पनि सहज वातावरण हुदैं जादा “पर्यटकको आगमनले व्यवसायमा बृद्धि आएको जानकारी गराउनु भयो। कोरोना कहर अगाडि रिसोर्टमा क्यानाडा, लण्डन अष्ट्रेलिया, जापान, चाइना, पाकिस्तान लगायतका देशहरुबाट पर्यटक आउने लहर थियो। साथै भारतका विभिन्न राज्यबाट समेत पर्यटकको आगमन राम्रै थियो भने स्थानिय र आन्तरिक पर्यटकको पनि कुनै कमी हुदैन थियो।” रिसोर्टका संचालक गीरीले बताउनुभयो।
रिसोर्टमा आगन्तुक पाहुनालाई फिसिङ, क्याम्प फायर, कल्चरल नृत्य, जङ्गल सफारी, बोटिङ्ग र एलिफेन्ट राइडिङ्ग प्याकेजिङ वा इण्डिभिजुवल समेतको व्यवस्था रहेको छ । ५२७ प्रजातीका चराको अवलोकन गराउन प्रोफेशनल गाइड सहित व्यवस्था गरिएको संचालक गीरीले बताउनु भयो । परिवारमैत्री वातावरण रहेको रिसोर्टमा सभा सम्मेलनका लागी ५०० जना अटने हल रहेको छ । एकपल्टमा ३० देखी ५० जना सम्म पाहुनालाई स्वागत गर्न सकिने स्थानीय परिवेशमा एसि सहितको १३ वटा कटेज निर्माण गरिएको छ । ४ विगाह क्षेत्रफल रहेको रिसोर्टमा हाँस, कुखुरा, माछापालन लगायत अर्गानिक तरकारी खेती समेत संचालन गर्दै आएको छ ।
इनरुवा ३ महेन्द्र चोकबाट प्रहरीले दुई दिनको अवधिमा पेस्तोल सहित चार जनालाई पक्राउ परेको छ ।प्रहरीले हिजो बेलुका र आज बिह...